Mobile Emulator siinayaa user bidhaamaysa waxa website fiirin lahaa haddii viewed on casriga ah. Mid ka mid ah wax, waa in aan maanka ku hayo waa in aan dhammaan websites eegto isku mid. Websites badan ayaa loogu tala galay, u PC / laptop iyo markii viewed on casriga ah, kuwaas oo u eeg wadajir kala duwan. La'aanta flash ku darayaa in shaashada la qaboojiyay. Sidaas marka la dhigaayo website-ka, waxaan u baahanahay in aad maskaxda ku hayso sida tan fiirin doonaa casriga ah. Si taas loo sameeyo waxaan ka dhigi kara isticmaalka emulators mobile oo wuxuu naga siin Eebe u dareento sida website-ka eegi doona guud ahaan casriga ah ee kala duwan. Emulator A mobile sii dayn doonaa inaad baadhis ku samayso website oo aad siiso macluumaadka sida wanaagsan ay u egtahay on mobile ah iyo sidoo kale emulator wanaagsan tijaabin doonaa website-ka ee internetka kala duwan.
A emulator mobile wanaagsan ma aha oo kaliya bandhigayaa fiirin iyo dareenka ah website ku saabsan mobile ah, laakiin sidoo kale hubi waxa ku jira website-waqtiga dhabta ah, hubi khaladaadka codes iyo sidoo kale tayadoodii qaab goobta.
SDK Android yimaado leh Native Android Emulator, oo waxay ka caawisaa in ay ku dhiirigelinayaan in uu ordo oo tijaabi codsiga xataa aan haysan qalab ay sidaa u sameeyaan. Waxa kale oo la Timaadda gaadmada ah oo kala duwan si ay u sameeysa isticmaali kartaa si aad u aragto sida codsiga fiirin doonaa sida ku dhufto ee kala duwan. Emulator waxaa la siiyaa set oo ah furayaasha navigation oo kaa caawin kara sameeysa ah si ay u tijaabiso in siyaabo kala duwan.
The SDK phone daaqadaha yimaado leh daaqadaha emulator hooyo on qalab laftiisa si ha ku dhiirigelinayaan in uu tijaabin. Xusuustiisu default qoondeeyey waa kaliya 512 k taas oo macnaheedu yahay waxaad tijaabin kartaa codsiyada ee telefoonada gacanta isagoo xasuus yar. Waxaa intaa dheer, iyada oo la isticmaalayo emulator ah loogu talagalay Windows phone 8, weli waxaad ka eegi kartaa codsiga daaqadaha 7.0 iyo wixii ka sareeya oo waa faa'iido weyn.
Emulator Phone Mobile
Tani waa mid ka emulator caanka ah kaas oo loogu talagalay si ay u tijaabiso tiro badan oo ah Qalabka telefoonada gacanta ee guud ahaan dhufto. Waxaa loo isticmaalaa si looga baaro iPhone, Blackberry, Samsung oo dheeraad ah. Waxa kale oo ay ku siinaysaa macluumaad ku saabsan, taas oo browser goobta waxaa ugu fiican.
Tani waa emulator waxtar leh maadaama ay aad caawisaa si loo hubiyo ka jawaabid ee website. Waxaa sidoo kale wuxuu hubinayaa sida website muuqataa guud ahaan dhufto. Tani waxay kaa caawinaysaa in aad ku hubin sida aad website u muuqataa oo ay jawaab u tahay falalka user. Waxa kale oo ay qaadataa daryeelka tirada screen kala duwan oo ay kuu oggolaadaan in aad la qabsato ee dhererka iyo ballaca. Waxaa hubinayaa deegaanka iyo sidoo kale websites online. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad hubiso pixel internetka by pixel, oon kuu oggolaadaan in aad u qabsato dhibcood kaga dhigto.
ScreenFly ka Quirktools waa emulator aad u wanaagsan in kooxda. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad tijaabiso sida website ka dhex muuqan doonaa dhufto ee kala duwan iyadoo la isticmaalayo qaraarada kala duwan. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad u hubiyaan qalabka sida telefoonada casriga ah,, iyo TV. Waa qalab weyn oo loogu talagalay horumarinta si loo hubiyo website-ka si fiican oo la qabsado dhinacyo kala duwan sida iyo marka loo baahdo. ScreenFly isticmaalaa farsamo fudud IFRAME oo soo bandhigay goobta ee dhinacyada kala duwan. Waxa kale oo ay jabto xal screen by qalabka si aad wadaajin karo xallinta screen la qalab caadi ah. Waxa kale oo ka shaqeeya off xadhig su'aal si aad u soo diri kartaa guud ahaan URL ee goobta aad macmiilka u ah isaga si aad u hubiso sida aad website eegi doonaa likewith xal u gaar ah.
si ay u tijaabiso waafaqsan yahay iPad website-ka ee, waxaad ka heli kartaa la hubiyaa on iPad, dhuumaalaysiga. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad aragto website-ka sida in ay sida ay u ekaan doonto on iPad ah iyo sidoo kale ku siinayaa faa'iido ah ee samaynta isbedel haddii loo baahdo.
Wixii horumarinta ama imtixaanka ujeedada, waxaa lagama maarmaan ah in la helo in uu ordo Opera mini for your computer. Opera mini waxaa loo isticmaalaa iyadoo malaayiin isticmaale adduunka oo dhan. The browser Opera Mini wuu xadidan yahay awoodda iyo xadidan Java script shaqeynayaan. Si aad u hesho waxa aad u baahan tahay si buuxda u shaqaynaysa in ay Java iyo Microemulator u J2ME karti telefoonada.
Gomez diyaar mobile siinaysaa aad website rating u dhexeeya 1 ilaa 5 in ay ku adkaysato diyaar ah aad website. Waxaa lafaguraa ka badan 30 farsamooyinka horumarinta mobile la xaqiijiyay oo codes waafaqsanaanta caadiga ah. Waxa kale oo ku siinayaa talo ku saabsan samaynta website fiirin dheeraad ah oo la soo bandhigi karo oo si fiican u shaqeyso oo ku saabsan mobile ah. Waxa kale oo ay ku siinaysaa soo jeedinaya in la sameeyo horumar iyo qamaar arrimaha si ay u user ka badan saaxiibtinimo.
Sida Gomez, MobiReady sidoo kale waa online website lacag la'aan ah imtixaanka mobile. Marka aad soo gashid URL ee website-ka, waxa ay ka heli karaan qiimeynta innaad = ne on tiro ka mid ah koobin. Waxa Page imtixaanka, Mark ilaa Test, Test site for bogga internetka. Waxaa ka sii faahfaahsan ee dabiiciga ah marka la barbar dhigo MobiReady by la siinayo natiijada baaritaanka oo dhamaystiran oo ay ku jiraan dotMobi waafaqsanaanta, emulator qalab iyo warbixin faahfaahsan oo baadi.
W3C isa sudhsudhan OK mobile
Tani waa web ku salaysan isa sudhsudhan gacanta taas oo si toos ah xaqeedii aad website adigoo sida mobile saaxiibtinimo aad website yahay. Waxay leedahay taxane ah oo tijaabo oo loo ansixiyo aad website-beegyada uu ku salaysan kala duwan oo ku salaysan yahay nashqadda imtixaanka MobileOK ee ay W3C.
Sida loo isticmaalo Andriod Emulator
Android ayaa emulator hooyo. Waxaa sidoo kale la emulator cross-madal. Halkan waa edbinta ah tallaabo-tallaabo ku saabsan sida loo qotomiyey.
Download xidhmada ku haystaa oo qalab Android Horumarinta ama ADT u madoobaad iyo Android Software Kit horumarinta. Raac tilmaamaha Google ayaa loo soo dajiyo SDK iyo rakibi oo dhan doorashada default iyo sidoo kale "Intel x86 Emulator Accelarator"
Create an Device Virtual Android aallada in idinku imtixaami yihiin. In Tababaraha AVD ee liiska qalabka horena la siiyo, waxaad dooran kartaa mid ka mid ah oo guji "Abuur AVD"
Calan kasta oo aad jeceshahay u processor iyo dooro "Maqaarka No" iyo "Isticmaalka GPU martida". Hadda waxa uu diyaar u yahay inuu u tartamo qalabka dalwaddii oo tijaabo ah oo aad website aad u. Waxaad isticmaali kartaa Android ee browser inaad baadhis ku samayso website.
> Resource > Emulator > Top 10 Free Mobile Emulators tijaabo ah oo aad Website